Delestazy : « Takaitran’ny korontana » -
AccueilRaharaham-pirenenaDelestazy : « Takaitran’ny korontana »
09/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanolotra vahaolana maharitra hanafoanana ny delestazy ny filohan’ny repoblika, tamin’ny kabariny nandritra ny lanonana noho ny asaramanitra teny Iavoloha ny zoma teo. Lehibe indrindra amin’izany ny fampiasana ny angovo azo havaozina. Eo koa ny fanampiana isa ny toho-drano hamokarana herinaratra. Efa napetraky ny filoha tao Ambatolampy moa ny vato fehizoron’ity angovo azo havaozina ity ny faramparan’ny taona 2016 teo sy ny fametrahana toho-drano hanampy amin’ny famokarana herinaratra.
Notsiahivin’ny Filoha tamin’ny kabariny koa, fa vokatry ny korontana politika nifandimby teto no mbola nampisy ny delestazy. Teo koa ny tsy fahaizan’ny mpitondra nifandimby nitantana io Jirama io. Hatramin’izao dia mbola manentsina ny fatiantoky ny Jirama foana ny fanjakana. Mahatratra hatrany amin’ny 300 miliara isan-taona ny vola tsy maintsy hanetseman’ny fanjakana an’izany. Manginy fotsiny ny halatra jiro, halatra rano, halatra solika, …mahazo ny Jirama. Mbola mampiahiahy koa aza io hain-trano lava mahazo ny Jirama io.
Tsy ny fitondrana ankehitriny mihitsy no te hampitarazoka ny ady amin’ny fanafoanana ny delestazy, raha ireo ezaka marobe entiny hatramin’izao no jerena. Efa manao izay ho afany amin’ny fisorohana an’izany izy saingy misy ny “mpamosavy malemy” ao anatin’ny fitantanana io orinasam-panjakana io ka mahatonga azy io ho sarotra harenina. Mora foana ny miteny hoe “ telo volana tsy voavaha ny delestazy” kanefa ireny olona ireny mihitsy no very tombontsoa voalohany raha tena mipetraka eto tsara ny politikan’ny angovo azo havaozina. Tsy mahagaga raha maro no mamingana an’ilay politikan’ny fametrahana ny angovo azo havaozina eto amintsika.
Maty momoka ny tolona, ary matimaty foana ireo izay voatifitra nandritra ny hetsika fitaritan’olona ho eny Ambohitsorohitra, izay faritra mena ny 7 feboary 2009, ankehitriny mantsy dia tsy tazana intsony ny mpitarika ny vahoaka hatao ...Tohiny